Semalt: २०२१ एसईओ गोप्य प्रचलनहरू अनुसरण गर्न
SEO विशाल र भ्रामक हुन सक्छ। प्रति सत्र के काम गर्छौ भन्ने थाहा बिना, SEO पेशेवरहरु लक्ष्य हिट गर्न असफल रहनेछ। हामीले कारकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ जुन कोर वेब वाइटल देखि सेमन्टिक्स, ज्ञान ग्राफहरू, र संस्थाहरू बुझ्ने हो। यहाँ केहि SEO अवधारणाहरु छन् तपाईले आफूलाई २०२१ भित्र परिचित गर्नु पर्छ।
गत वर्ष, हामी सबैले एसईओको महत्त्व दोहोर्‍याउनुपर्‍यो जुन हाम्रो ग्राहकहरूको साइटहरूमा भ्रमण गर्नेहरूका लागि उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव सिर्जना गर्ने कुरामा दोहोरो ध्यान केन्द्रित गरियो। हामीले देख्यौं मोबाईल-प्रथम अनुक्रमणिका गुगलको पृष्ठ अनुभव अपडेटको आसन्न परिचयको माध्यमबाट रोल आउट गरियो र कोर अपडेटहरू यसको अपडेट अपडेटेड। यो हाम्रो कोर एसईओ अवधारणाहरूको शीर्षमा रहन यो पहिलेभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ यदि हामी आफ्नो ग्राहकहरूलाई उनीहरूको SERPs मा â „–1 को रूपमा राख्नको लागि कुनै पनि अवसर खडा गर्ने छौं।
२०२१ को माध्यमबाट हामी केहि अवधारणाहरू छन् जुन मौलिक रहन्छन् जसरी हामी सफलताका लागि तयार हुन्छौं।
मुख्य वेब महत्वपूर्णहरू
जुन २०२१ लाई बाहिर सेट गर्नका लागि सेट गर्नुहोस्, गुगलको पृष्ठ अनुभव र कोर वेब महत्वपूर्ण (यो कोर वेब बाइटलहरूमा लेखलाई हाइपरलिked्क गरिएको हुनुपर्दछ) केहि हाम्रो तकनीकी र गैर-टेक्नोलो एसईओ टोलीहरू परिचित छन्।
कोर वेब भिटेलहरू के हुन्?
कोर वेब वाइटलहरू नयाँ मापदण्डहरू हुन् जुन गुगलले मूल्या to्कनको लागि प्रयोग गर्न चाहान्छ त्यो पृष्ठ हो वास्तवमा एक शीर्ष-गुणवत्ता प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ।
यी मेट्रिक्स समावेश:
सब भन्दा ठूलो सामग्री रंग (LCP): यस मेट्रिकले एकपटक क्लिक गरेपछि पृष्ठको मुख्य सामग्री लोड हुन सक्ने गति मापन गर्दछ। एक अवतरण पृष्ठमा, पहिलेको भन्दा राम्रो, र seconds सेकेन्ड भन्दा माथिको केहि असफलताको रूपमा वा मानक प्रदर्शन मुनि दर्ता हुनेछ।
पहिलो इनपुट ढिलाइ (FID): यो गति मापन गर्दछ जुन एक पृष्ठमा अवतरण पछि प्रयोगकर्ताले पृष्ठसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ। FID उपायहरू हेर्नका लागि कि पृष्ठ १० लोड भए पछि यो १०० मिलिसेकेन्डको साथ देखा पर्न सक्छ।
संचयी लेआउट शिफ्ट (सीएलएस): एक मेट्रिक जसले माप गर्छ कि कति पटक प्रयोगकर्ताले अप्रत्याशित रूपरेखा शिफ्ट अनुभव गर्न सक्छ। औसतमा, पृष्ठहरूले ०.१ भन्दा कमको सीएलएस स्कोर कायम गर्नुपर्दछ।
गुगलले यी सबै नयाँ मेट्रिक्सको परिचय गराएको छ साइटहरूलाई पूर्णको नजिक बनाउनका लागि। गुगलले भनेका छन कि सबै कोर वेब महत्वपूर्णहरूको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नुपर्नेछ कुनै पनि साइट सम्बन्धित रैंकिंग संकेतको आनन्द लिन भन्दा पहिले।
कोर वेब भिटेलहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दा हामी ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्छौं:
सूचना पृष्ठ सामग्री
छवि कम्प्रेसन (पृष्ठको लोडलाई सकेसम्म प्रकाशको रूपमा बनाउन)
साइट गति र प्राविधिक संरचना।
मोबाइल पहिलो अनुक्रमणिका
पछिल्लो वर्ष, गुगलले घोषणा गर्‍यो कि मोबाइल पहिलो अनुक्रमणिका नयाँ आदर्श बन्न गइरहेको छ।
मोबाइल पहिलो अनुक्रमणिका भनेको साइटहरूको क्रमबद्ध संकेतहरू अब यसको मोबाइल संस्करणबाट आउँदैछ न कि डेस्कटप संस्करण मात्र। आज लगभग सबै वेब ट्राफिकको% 55% मोबाइल उपकरणहरूबाट आउँदछन्। व्यक्ति चाल मा खोज्न को लागी, र एक मोबाइल उपकरण को उपयोग गर्न को लागी धेरै अधिक सुविधाजनक छ। मोबाइल उपकरणबाट खोजी संख्या बढाउन मात्र सेट गरिएको छ। पहिले जस्तो नभई, एक मोबाइल मैत्री साइट अब पर्याप्त छैन। अब, हामी पहिले मोबाइलbबी गर्न आवश्यक छ।
यसको मतलब यो हो कि हामीले साइटको मोबाइल पक्षलाई डेस्कटप साइट संस्करणमा एक सहायकको रूपमा विचार गर्न रोक्नु पर्छ। यसको सट्टामा हामीले तपाईंको साइटको मोबाइल मैत्री संस्करणलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ।
यहाँ केहि व्यावहारिक तरिकाहरू छन् जुन हामी साइटको मोबाइल SEO सुधार गर्न सक्दछौं।
एक मोबाइल मैत्री परीक्षण लिनुहोस्।
भाँचिएको लिंक र अन्य गलत पुनर्निर्देशनहरू ठीक गर्नुहोस्।
छविहरू कम्प्रेस गर्नुहोस् जुन हामी सक्दछौं।
प्ले गर्न नमिल्ने सामग्री र अवरुद्ध स्रोतहरू हटाउनुहोस्।
सबै लुक्ने पप-अपहरू र मध्यवर्तीहरू हटाउनुहोस्।
मोबाइल उपयोगिता सुधार गर्नुहोस्।
मोबाईल साइटका लागि अडिट चलाउनुहोस् कुनै पनि अतिरिक्त तत्वहरू फेला पार्न जुन हामी राम्रो मोबाइल अनुभवको लागि अनुकूलित गर्न सक्छौं।
मेशिन लर्निंग र स्वचालन
मेशिन शिक्षा खोजी ईन्जिन रैंकिंग एल्गोरिदमहरूको अभिन्न हिस्सा भएको छ। मार्च २०१ 2016 मा, Google ले घोषणा गर्‍यो कि र्याकब्रेन (यसको मेशिन शिक्षा क्षमताको पछाडि एल्गोरिथ्म) यसको तेस्रो महत्त्वपूर्ण र ranking्कि signal संकेत बनेको छ।
मेशिन लर्निंग अर्थपूर्ण खोजसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ। मेशिन लर्निंग को माध्यम बाट, एक खोज ईन्जिनले एक अस्पष्ट खोज क्वेरीको अर्थ के बारे मा शिक्षित अनुमान बनाउन सक्छ। मेशिन लर्नि Withको साथ, खोजी ईन्जिनले थाहा पाउनेछ कि तपाईले खोज्नु भएको कुरा के हो भने पनि क्वेरी गलत तरीकाले राखिएको छ भने। दिनको अन्त्यमा, मेशिन लर्निंग नै गुगलले उत्तम खोज परिणामहरू समग्रमा डेलिभर गर्ने कारण हो।
रैंक मस्तिष्क, अन्य सिकाउने प्रणालीहरू जस्तै, पहिले उनीहरूको वास्तविक आशय भविष्यवाणी गर्न सक्षम हुन प्रयोगकर्ताको व्यवहारको जाँच गर्दछ, ताकि यसले उत्तम खोज परिणामहरू डेलिभर गर्न सक्दछ। दुर्भाग्यवश, के हुन्छ "सबै भन्दा राम्रो" परिणाम एक प्रश्न देखि अर्को क्वेरी फरक। यसले मेशिन सिक्नको लागि अप्ठ्यारो पार्दछ धेरै गाह्रो।
हामीले पत्ता लगायौं कि यसको लागि उत्तम तरीका भनेको बलियो संसाधनहरू सिर्जना गरिरहनु हो जुन खोजी र प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि अनुकूलित छ। गुगलको हालको एल्गोरिदम, मेशिन लर्निंग, र स्वचालनको प्रयोग अगाडि सोच्दै, यी तत्वहरू शक्तिशाली एसईओ उपकरणहरू पनि हुन्। हाम्रो एसईओ प्रयासहरूको साथ उनीहरूको संयोजनले हामीलाई वास्तविक-समय अन्तर्दृष्टि उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ, र हामी दोहोरिने कार्यहरू स्वचालित गर्न सक्दछौं, जसमा समावेश हुन सक्छ:
SEO अंतर्दृष्टि र लेखा परीक्षा
सामग्री सक्रियता र सिंडिकेशन
स्वचालित वेब त्रुटि पहिचान र द्रुत फिक्सहरू
केहीले यो आश्चर्यजनक महसुस गर्न सक्दछन् कि EAT (यो EAT मा लेखमा हाइपरलिked्क हुनुपर्दछ) अवधारणा नयाँ अवधारणा होइन। EAT २०१ 2014 देखि एक चीज भएको छ, जब यो Google गुणवत्ता दिशानिर्देशहरूमा पहिलो पटक देखा पर्‍यो।
E-A-T एक अवधारणा हो जुन विशेषज्ञता, आधिकारिकता, र विश्वव्यापीतामा केन्द्रित हुन्छ। यी तीन कारकहरूले कुनै पनि साइटको सफलताका साथै कुनै पनि ब्रान्ड/व्यवसायलाई अनलाइन उपस्थितिको साथ ठूलो योगदान पुर्‍याउँछन्।
जे होस् E-A-T एल्गोरिथ्म होईन, यसको श्रेणीकरणमा अप्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ, खास गरी यदि कुनै साइटमा प्रकाशित सामग्रीले विशेषज्ञता, अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दैन र तपाईंको श्रोतालाई तपाईंलाई विश्वास गर्ने कारण दिन्छ।
तपाईंको विषय सामग्री सामग्री विशेषज्ञता र ज्ञान संकेत गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
वेबसाइटको विश्वसनीयता र अधिकार यसको सामग्रीहरूमा देख्न सकिन्छ।
वेबसाइटको संरचनात्मक गुणवत्ता र सुरक्षा प्रयोगकर्तालाई भन्छ कि यो विश्वासयोग्य छ।
विज्ञहरूद्वारा अफ-पृष्ठ सामग्री।
ज्ञान अन्तराल, शब्दार्थ र संस्थाहरू
गुगलको २०१ming को हमिbबर्ड अपडेट मुख्यतया यसको खोज इञ्जिनलाई सबै प्रश्नहरू अझ राम्ररी बुझ्नको लागि सिकाएर खोजी सटीकता सुधार गर्न थियो। प्रत्येक शब्दलाई एकल तत्वको रूपमा हेर्नुको सट्टा, गुगलले सम्पूर्ण खोज क्वेरी र त्यस क्वेरीमा शव्दहरू बीचको सम्बन्धमा हेर्न सिक्यो।
आज, सिमेन्टिक खोज पहिले भन्दा राम्रो भएको छ। खोज ईन्जिनले क्वेरी प्रसंग र शब्दहरू बीचको सम्बन्ध बुझ्नको लागि अझ राम्रो बनाएको छ। सिमेन्टिक खोजीको लक्ष्य खोजी ईन्जिनहरूका लागि हो तपाईंले बुझ्नुहुने अर्थ के हो भनि बुझ्नु जब तपाईं प्राकृतिक रूपमा बोल्नुहुन्छ।
यदि एक प्रयोगकर्ताले गुगललाई सोधे भने, यसको समीक्षा के हो? र खोजीकर्ता इटालीको होटेलको अगाडि उभिरहेको छ; आदर्श रूपमा, गुगलले उनीहरूको स्थानलाई थाहा पाउनको लागि यस सन्दर्भमा, "यो" होटेललाई संकेत गर्दैछ, र खोजीकर्ताले जान्न चाहन्छ कि यो राम्रो पिक हो कि भनेर।
E-A-T संरचित डाटा र स्किमा.org द्वारा पनि मद्दत गरिएको छ। E-A-T मा, हामीले ज्ञान ग्राफमा पनि ध्यान दिएर हेर्नु पर्छ। अर्थ खोजको मेकानिक्समा धेरै सूक्ष्म बारीक छन्। अन्तमा, एक आधिकारिक पृष्ठ जुन यस विषयमा डाइभ गर्दछ र गहिराइ अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ सम्भवतः दर्जनौं अन्य पृष्ठहरू जुन तपाईं फरक कुञ्जी वरपर बनाउनुहुन्छ भन्दा राम्रो दर्जा पाउनेछ।
यो देखा पर्दछ किनकी एक व्यापक स्रोत गुगल लाई बढी अपील गर्दछ किनकि यो गहिरो छ र यसले खोजकर्ताको मनसाय पूर्ण रूपले सन्तुष्ट पार्छ।
ज्ञान ग्राफको साथ, गुगलले शीर्षकहरूको बारेमा राम्रोसँग संरचित डाटाको लाभ उठाउन सक्दछ, र अर्थ अभिवृद्धि डाटाको साथ, यसले ज्ञान ग्राफ बनाउँछ। SEO पेशेवरहरुलाई मनपर्दछ Semalt अब यी शीर्षकहरूमा लक्षित सामग्री सिर्जना गर्न सक्दछ जुन तपाईंको साइटमा सामग्रीको ग्राफ र गुगलको समझलाई प्रभाव पार्न सक्छ।
गुगलले राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभवमा धकेल्नु र ध्यान केन्द्रित गर्न जारी राख्नेछ, र हामीले कसरी यी कुञ्जी एसईओ अवधारणाहरू सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने बारे हाम्रो समझ विस्तार गर्न जारी राख्नुपर्दछ। हाम्रो नयाँ सामान्य उपभोक्ता अनुभवका लागि सबै सामग्री अप्टिमाइज गरीरहेको छैन र प्रत्येक ग्राहकको एसईओ प्रदर्शन मापन गर्न टेक्नोलोजी र टेक्निकल लक्षणहरू अपनाइरहेको छ।
SEO पृष्ठ भर वाक्य वाक्यांश भरि कीवर्ड भर परे गएको छ। हामी एक चरणमा पुगेका छौं जहाँ SEO तपाईंको सामग्री, वेबसाइट संरचना, र प्रदर्शन मार्फत आगन्तुकहरूको लागि राम्रो र अधिक महत्वपूर्ण अनुभवहरू प्रदान गर्न बढी केन्द्रित छन्।